Ungayifumana njani iakhawunti yakho ye-Instagram kwimeko yokugenca | I-Androidsis
Kungenzeka ukuba sifumanise ukuba kwi-Instagram kukho omnye umsebenzisi onegama lethu elifanayo. Ayisiyonto imbi leyo, ngaphandle kokuba kuthethwe ngeakhawunti izama ukuzenza ongeyethu. Kule meko, kuya kufuneka siphinde sibize igama lethu lomsebenzisi, ukunqanda loo mntu ekulingiseni isazisi sethu. Isicelo sicamngca ngamatyala aliqela apho oku kwenzekayo, kulungile ukuba kuthathelwe ingqalelo.
Ke ngoko, ngezantsi Sikubonisa xa kufuneka silifezekisile eli bango igama lethu lomsebenzisi kwi-Instagram, kunye nendlela ekunokwenzeka ngayo ukuba wenze oku. Ukuze kuthi kwenzeka ukuba kwenzeke kuwe, uyazi amanyathelo oza kuwalandela kolu hlobo lwemeko.
1 Singalibanga nini igama lomsebenzisi
2 Indlela yokubanga igama lakho lomsebenzisi kwi-Instagram
3 Uyenza njani ibango ukuba iakhawunti yakho iye yagqogqwa
Singalibanga nini igama lomsebenzisi
Kwi-Instagram, Amagama abasebenzisi ahlala ahlulwe ngokusekwe kulandelelwano lwezicelo ezithunyelwa kwinethiwekhi yoluntu. Ke ngoko, umntu wokuqala ukucela igama elithile iya kuba nguye oya kulithatha. Ke ukuba igama lakho ngu-Eder Ferreño, njengam, ukuba omnye umntu ukhethe elo gama lomsebenzisi, ngekhe ndikwazi ukulicela ukuba ukhona omnye umntu osele enalo. Ngapha koko, uya kubona ukuba xa oku kusenzeka, isicelo siya kuncoma amanye amagama abasebenzisi.
Nangona kukho iimeko apho i-Instagram ivumela umsebenzisi ukuba anike ingxelo ngegama. Sifumana iimeko ezimbini ezithile apho inethiwekhi yoluntu inika ithuba kubasebenzisi. Mhlawumbi ku ukubiwa kwesazisi okanye kwimeko yokophula uphawu lwentengiso.
Kweyokuqala, ukubiwa kwesazisi, kuxa umntu esebenzisa igama lakho, kodwa endaweni yoko ikwasebenzisa iifoto zakho kwaye izenza ngathi nguwe kwinethiwekhi yoluntu, ngeenjongo ezinokwahluka kakhulu. Ukusuka ekuhlukumezeni, ekuphangeni okanye ekubileni idatha yobuqu yomsebenzisi.
Ityala lesibini i-Instagram engalivumeli kuxa sophula uphawu lwentengiso, esele lubhalisiwe. Umzekelo, ukuba umntu uvula iakhawunti kwaye usebenzisa igama @fnac. Ukuba nguwe wokuqala ukubhalisa i-akhawunti ngelo gama, akukho ngxaki. Kodwa ukuba ukongeza koku, usebenzisa ilogo okanye ezinye izinto ezikhuselweyo luphawu lwentengiso Ukulahlekisa abasebenzisi, emva koko unokuba neengxaki kwinethiwekhi yoluntu.
Enye imeko apho singathatha inyathelo yile ukuba iakhawunti yethu igqekeziwe, ukuba okanye ukuguqula izinto zayo. I-Instagram idale inkqubo onokufumana ngayo kwakhona iakhawunti. Kodwa ngala matyala mathathu apho siya kuba nakho ukubanga igama lomsebenzisi kwinethiwekhi yoluntu.
Indlela yokubanga igama lakho lomsebenzisi kwi-Instagram
Ukuba ufuna ukunika ingxelo yokuba kukho iakhawunti ekwenza kuwe kwi-Instagram, sinefom ekhoyo. Ungangena kuyo kwesi sixhobo. Apha kuya kufuneka sigcwalise uluhlu lweempendulo ngamanyathelo ekufuneka siwenzile ukuze siqhubeke nenkqubo. Ukuba sinokufikelela kwiakhawunti yethu, sinokukwenza oko ngelixa ungene ngemvume.
Olukhetho olunomdla kuthi kule meko yile Umntu othile wenze iakhawunti ezenza ngathi ndim okanye umhlobo. Sinqakraza kuyo kwaye siyinike elandelayo. Apho, uya kuzibuza ukuba ngaba ngabo abalinganisa, kwaye kuya kufuneka sifake idatha yethu (igama lokwenyani kunye nefani). Siza kubona ukuba kufuneka sincamathisele uxwebhu oluthile ukuqinisekisa inkqubo.
I-Instagram icela abasebenzisi ukuba bathumele isazisi oku kuyasebenza, nokuba yi-DNI, ipaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba, nokuba yeyiphi na oyifumene ngesandla ngelo xesha. Ukongeza, kufuneka sibhale igama lomsebenzisi elisebenzisa iakhawunti. Siyacelwa ukuba sichaze ukuba kwenzeka njani ukwenza oku kungasasebenzi kule akhawunti.
Xa sinayo yonke idatha, kufuneka siyithumele. Siza kube sithumele isicelo kwi-Instagram ukuthatha inyathelo kunye nokuphononongwa kweakhawunti wathi ngokukhawuleza, ukuze uyisuse kwinethiwekhi yoluntu. Ixesha elithathwayo ukuqhubekekisa esi sicelo lihlala lisahluka. Yimeko engathandekiyo, kodwa kwenzeka ntoni kwezinye iimeko, ngaphandle kokuba uneakhawunti eqinisekisiweyo.
Uyenza njani ibango ukuba iakhawunti yakho iye yagqogqwa
Ukuba okwenzekileyo kukuba umntu othile ungene kwiakhawunti yethu ye-Instagram, isisombululo asikho nzima. Eyona nto inokwenzeka, asiyi kuba nakho ukungena kwiakhawunti ngokwesiqhelo. Ke, kwi window ukungena kwi-app kwi-Android, cofa kwindawo ekuthiwa «Fumana uncedo».
Into elandelayo ekufuneka siyenzile ukubhala igama lomsebenzisi kwinethiwekhi, emva koko ucofe kwiqhosha elilandelayo. Emva koko siya kucelwa ukuba sikhethe indlela esifuna ukuyifumana ngayo iakhawunti. Nokuba yiSMS, imeyile okanye usebenzisa iakhawunti yeFacebook. Ecaleni kwabo Sifumana ukhetho olubizwa ngokuba "Ngaba ufuna uncedo olungakumbi?" Yeyiphi ekufuneka siyisebenzisile xa kunokwenzeka ukuba iakhawunti yethu igqekeziwe kwinethiwekhi yoluntu.
Ngokucofa kuyo, sihanjiswa kwi iwindow entsha esinefom kuyo. Kuya kufuneka singenise i-imeyile, uhlobo lweakhawunti esinayo kwi-Instagram kunye nesizathu sokuba singakwazi ukufikelela kuyo. Chaza ngokweenkcukacha indlela iakhawunti yethu eye yaqhekezwa ngayo, ukuze kucace ukuba esi sesona sizathu sokuba singayifumani. Kananjalo sinokuqinisekisa njani ukuba iyiakhawunti yethu.
Ngala manyathelo, sikunika ukuthumela kunye Sele siyithumele le fomu ku-Instagram. Inkampani iyakuhlalutya oku kwaye kunokwenzeka ukuba isincede siphinde sifumane iakhawunti yethu, ukuze siyisebenzise ngokwesiqhelo. Kule meko yetyala, isisombululo esifanelekileyo kukusebenzisa amanyathelo amabini, oko kusinika ukhuseleko olongezelelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyenza njani kwaye nini igama lakho lomsebenzisi kwi-Instagram